Mpisera nijoro vavolombelona amin’ny mahazo ny mainty hoditra ao Brezila taorian’ny famonoana ny tanora iray tanam-polo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Marsa 2019 5:36 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, Español, Ελληνικά, Français, русский, Italiano, English
Tsy navelan’ny mpiambina hihetsika teo amin’ny tany i Pedro na dia efa tsy nahatsiaro tena intsony aza . Pikantsary avy amin’ny lahatsarin’ilay mpanoratra tsy nitonona anarana, izay naparitaka betsaka tany Brezila. Nalain’i Poder 360.
Hita ao anatin’ny lahatsary naharitra roa minitra izay niparitaka be tao amin’ny Aterineto, i Pedro Henrique Gonzaga, izay 19 taona, nihohoka tamin’ny tany tao anaty fivarotan-dehibe iray tao Rio de Janero, any Brezila, niaraka tamin’ny tanana roa tsy mihetsika manaraka ny vatany raha mbola nanindry azy teo amboniny ilay mpiambina Davi Amâncio sady nihazona azy teo amin’ny tendany.
Nihiakiaka ny mpandalo iray nilaza hoe : ‘’Tsy mihetsika ny tanany’’ ; hoy ny iray hafa : ‘’Tsy mahatsiaro tena izy’’. Saingy tsy nety niala ilay mpiambina. Hoy izy nanontany an’ilay lehilahy iray nanatona no sady naka sary ny zava-niseho hoe : ’’Fa maninona ianao no maka sary ? Polisy angaha ianao ? Tsy mahazo maka sary ato anaty fivarotana ianao !’ ’Nahamarika ny vehivavy iray fa tsy nanao na inona na inona i Pedro, ary nanosika azy ilay mpiambina sady niteny hoe : ‘’Mandainga ianao !’’
Alarobia 14 Febroary 2019 tamin’izay. Nentina tany amin’ny hopitaly i Pedro ary adiny iray taty aoriana, nolazaina fa maty noho ny fijanonan’ny fony tampoka izy.
Namoaka fanambarana ny mpitantana ny fivarotana nanamarika fa saika hangalatra ny fitaovam-piadian’i Amâncio i Pedro. Nampiseho ny sarin’i Pedro nifamaly tamin’i Amâncio ny lahatsarin’ny CCTV ary nianjera tamin’ny tany indroa izy izay vao voatazona.
Maty sempotra noho ny nataon’ilay mpiambina fotsy hoditra ilay tanora lehilahy mainty hoditra, tao amin’ny fivarotan-dehibe iray tao amin’ny faritra mihaja iray tao Rio de Janeiro, any Brezila
Nosamborina teo no eo ihany i Amâncio, saingy navotsotra avy hatrany tamin’ny fandoavana antoka. Tsy mbola voampanga ho nanao heloka bevava mihitsy izy talohan’izao. Nanambara tamin’ny gazety ny lehiben’ny polisy niandraikitra ny raharaha fa ‘’tafahoatra loatra ny fihetsika fiarovan-tena’’ nataon’i Amancio.
Nilaza tamin’ny polisy ny fianakavian’i Pedro, izay niaraka taminy tao amin’ny toeram-pivarotana tamin’izy namoy ny ainy, fa an-dalana ho eny amin’ny hôpitalim-pitsaboana mpidoroka zava-mahadomelina izy ireo hitsabo an’i Pedro ka nijanona teo mba hividy zavatra.
Efa mahazatra ary tsy mahagaga ny olona maro any Brezila ny fahafatesan’ny tovolahy mainty hoditra tsy manana fitaovam-piadiana ka novonoin’ny mpiambina fotsy hoditra .
Ahitana ireo lehilahy mainty hoditra latsaky ny 20 taona ny ampaha-telon’ny vonoan’olona miisa 60.000 voarakitra isan-taona any amin’ity firenena any Amerika Atsimo ity . Misy lehilahy mainty hoditra maty isaky ny 23 minitra. Maro ny mihalehibe sy efa zatra ataon’ny manampahefana na ny fiarahamonina hoe jiolahy amin’ny ankapobeny.
Nahatsiaro tao amin’ny Twitter ny fotoana voalohany nisamboran’ny polisy azy i Fioti, ilay mpiangaly sady mpamokatra mozika rap any Brezila :
11 taona aho tamin’izay ary nosamborina sy nosavaina voalohany. Na mino izany ianao na tsia, nandeha ho any amin’ny tranom-barotra lehibe aho, niaraka tamin’ny rahalahiko, nandeha nijery sinema izahay. Teo amin’ny toerana fiandrasana bisy, nasain’ilay polisy nesorina teo imasom-bahoaka ny lobakay ary nambanany basy izahay. Noheveriko fa ho faty aho, saingy vao voalohany ihany izany.
Nahatsiaro ny raharahan’ny ankizy sy ny tanora mainty hoditra tany aloha izay novonoina ary nolazaina fa nanao heloka bevava tao amin’ny tambajotra sosialy ilay mpikatroka Rene Silva.
Tsy fantatro raha tsaroanareo fa rehefa maty i Eduardo, teto amin’ny Complexe do Alemao [trano bongo any Rio de Janeiro] dia niezaka mafy izy ireo ny hiampanga ity zazalahy kely vao 10 taona ity izay niaraka tamin’ny findainy fotsiny, teo anoloan’ny varavaran’ny tranony. Nipoitra tampoka ny sarin’ilay zazalahy kely nitondra fitaovam-piadiana avy any amin’ny tsy fantam-pihaviana tany ary nolazain’izy ireo fa izy io.
I Maria Edouarda indray izay maty TAO AMIN’NY SEKOLINY nandritra ny taranja ara-panatanjahantena dia noforonon’izy ireo fa nitaingina moto izy niaraka tamin’ireo jiolahy mitam-piadiana. Mitovy hatrany ny tantara eto, miezaka miampanga anay amin’ny fomba rehetra ry zareo.
Notifirin’ny polisy tsy amperin’asa tamin’ny volana Aprily 2015 i Eduardo de Jésus, 10 taona. Namaly ireo mpanao famotorana fa niaro tena izy, raha namaly ny tifitra iray avy any amin’ny mpitifitra iray tsy fantatra, izay nifanohitra tamin’ny fanambaran’ny vavolombelona iray nilaza fa tsy nisy tifitra akory teo.
Maty voatifitry ny bala miisa telo i Maria Eduarda da Conceiçao, 13 taona, tamin’ny volana Martsa 2017, teo antokontanim-pianarany nandritra ny fifampitifirana teo amin’ny polisy sy ny fikambanan-jiolahy mpivarotra rongony. Voampanga ho namono olona ny polisy iray .
Nitantara ny fanavakavaham-bolonkoditra niainany vao haingana ilay mpihiravavy MC Carol tao amin’ny Twitter. Rehefa voafidy tao amin’ny sekoliny izy mba hilalao an-tsehatra ny ‘’fofom-bady ‘’ amin’ny fampisehoana tao Saint Jean, izay fety nentim-paharazana any Brezila dia nandà tsy handihy hiaraka aminy ilay zazalahy fotsy hoditra izay tokony ho namany. Nilaza i Carol fa nihalehibe tao anatin’ny fahatahorana fotsy hoditra izy.
Io no iray tamin’ireo nifandraisako voalohany tamin’ny fanavakavaham-bolonkoditra. Raha ny marina, tamin’ny ANDRO VOALOHANY TAO AN-TSEKOLY ny voalohany indrindra. Nohidian’ireo andian-jazavavy fotsy hoditra tao amin’ny toeram-pivoahana aho tamin’ny androko voalohany ! (efa nalefako ny mikasika izany, ary nanontaniana aho hoe : ahoana no ataoko no mbola ahatsiarovako izany, kanefa zavatra efa ela be izany, mitranga izany satria rehefa tena maharary dia tsaroana.)
Namintina ny mety ho dikan'ny famonoana an’i Pedro Gonzaga tao amin’ny Twitter ilay mpanoratra Ale Santos, izay tamin'ny alàlan’ny andiana fifanakalozan-dresaka momba ny tantara Breziliana no tena namantarana azy:
Heloka bevava tonga lafatra ny fanavakavaham-bolonkoditra any Brezila : mamorona fepetra mampiely herisetra izy io, raha tokony hanasitrana ny fiarahamonina, ary aleony mamongotra ireo tanora izay manana endrikendrika mpanao heloka bevava noho ny fanavakavaham-bolokoditra.
Tena fandripaham-bahoaka, nasongadin’ny antontan’isa. #Manandanja ny Ain'ireo Mainty hoditra.
Nipoaka ny fihetsiketsehana nanerana an’i Brezila telo andro taorian’ny namonoana an’i Pedro tany amin’ireo tanandehibe miisa dimy lehibe indrindra ao amin’ny firenena. Nahitana sora-baventy izay nosoratana hoe : ‘’Vidas negras importam’’ izay hadika ara-bakiteny hoe ‘’Manan-danja ny Ain’ireo mainty hoditra’’, hetsika iray teraka tany Etazonia tamin’ny taona 2014 ary niparitaka tany Brezila tao anatin’ny taona vitsivitsy.
Toy ny nambaran’ i Lyz Ramos, mpianatra 19 taona, tao amin’ny Guardian hoe: “Tsy maintsy miezaka izahay manohitra izany raha mbola te ho velona. Lohahevi-dehibe izany”.